Paul Pogba ayaa ka hadlaya sida uu u ahaa qolka labiska kooxda Man United kadib guuldaradii 2/0 ahayd ee ka soo gaadhay Man City kulankii semi-finalka Carabao Cup, sanadkii labaad oo isku xigta oo ay garaaceen.
Laba gool oo ay kala dhaliyeen John Stones iyo Fernandinho ayaa ku filnaaday kooxda Pep Guardiola ee Manchester City inay u gudubto finalka Carabao Cup ee ay Tottenham kula ciyaarayaan garoonka Wembley bishii Abriil.
Manchester United ayaa heshay dhawr fursadood oo ay goolal ku dhalin kartay, qaybtii dambe ee kulankan ayay lumisay qaybtii hore ee ciyaarta, taas oo fursad u siisay Manchester City inay xawaaraha ku sii socoto.
Guuldaradan ayaa ahayd guuldaradii 4-aad ee semi-finalka ah ee Ole Gunnar Solskjaer sanad gudihii kadib guuldaradii Europe League ee ka soo gaadhay Sevilla xilli ciyaareedkii hore, guuldaradii Carabao Cup ee City markii labaad iyo FA Cup. .
Paul Pogba oo lahadlayey MUTV-ga Man United ayaa shaaca ka qaaday in qolka labiska kooxda uu yahay mid niyad jab leh isla markaana ay ciyaartooydu murugeen dhamaadkii ciyaarta.
Dabcan waa wax laga xumaado, maxaa yeelay tani ma ahan markii ugu horreysay oo ay City nagu garaacdo gurigeenna. ” Ayuu yiri Pogba.
Tababaraha reer France ayaa intaa ku daray: “Waan ka murugeysanahay natiijada, labada goolba waxaan ka helnay dhinacyo kala duwan.
Kaliya labada koox midkood ayaa guuleysan lahaa waana nalaga badiyay, ma ahan markii ugu horeysay sidaan horay u iri, waa guuldaro niyad jab leh maxaa yeelay koob ayaa meesha yaala. Waa inaan si adag u shaqeynaa ”.